Imaaradka Carabta Oo Puntland kala baxay Saraakii ka joogay | Saadaal Media
Imaaradka Carabta Oo Puntland kala baxay Saraakii ka joogay
Magaalada Bosaaso waxaa ka amba baxay Madaxdi iyo Tababarayashii Imaaradka Carabta ee kujiray xeradii Ciidanka Badda Puntland PMPF , halkaas oo ay mudo dhowr sano ah ku Taba bari jireen Ciidamada bada Puntland.
ilo xog’ogaal ah ayaa Radiosyl.com waxa ay uxaqiijiyeen in ay isku dayeen saraakiishii imaaradka ee ku sugnaa Bosaaso in ay horay usii qaataan qalab muhiim ahaa oo yaalay Xereda ciidanka PMPF balse loo diiday ,Inkastoo Arrintaas ay gaashaanka u daruureen mas’uuliyiinta Maamulka Puntland.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa Dowladda Imaaraadka Carabta kala wareegaysa xeredii iyo ciidankii ay Muqdisho ku taba bari jireen imaaradka carabta , waxayna dowladda ay sheegtay in ay mas,uuliyada ciidankan ay iyadu ka faalo qaadi doonto ,
Magaalada Bosaaso maanta waxaa ka amba baxay Madaxdi iyo Tababarayashii Imaaradka Carabta ee kujiray xeradii Ciidanka Badda Puntland PMPF , halkaas oo ay mudo dhowr sano ah ku Taba bari jireen Ciidamada bada Puntland.
MEESHAAN CIIDAN MAJOOGO EE DADKAANI HASHAQAYSTAAN. NOLOSHOODA IYO NOLOSHA QOYSASKOODANA HAKAFAALO QAADEEN??
HADIIKALE GAAJO IYO BOOB AYAA LAGAFILANKARAA? WAXYAABAHA WAQTILUMISKA AH IYO DHALANTEEDKA SHACABKA HALAGA DAAYO??